$ 25.000 ho takalon'ny fampahalalana momba ireo prototypes nangalarin'i Razer tao amin'ny CES 2017 | Vaovao momba ny gadget
25.000 $ ho fampahalalana momba ireo prototypes nangalarina tamin'i Razer tamin'ny CES 2017
Iray amin'ireo vaovao tsy tianay mihitsy izany ary taorian'ny zava-niseho tamin'ny andro farany an'ny CES tany Las Vegas miaraka amin'ireo prototypes Razer dia tsy misy vaovao momba izay tompon'andraikitra na tompon'andraikitra tamin'ilay halatra niseho. amin'ny ny alahady lasa teo. Ankehitriny ny mpamokatra dia mandray ny lalan-kaleha ary te-ho tonga amin'ny faran'ny raharaha mamoaka fanambarana manolotra valisoa $ 25.000 ho an'ireo izay afaka manome angon-drakitra isan-karazany momba ireo tompon'antoka tamin'ity halatra ity.
Araka ny maneho hevitra ny sonia, ity valisoa ity dia homena am-pahendrena feno mba tsy hanakorontanana ny filaminan'ny olona ary miankina hatrany amin'ny vaovao voaray, habetsany no haparitaka, mazava ho azy fa izany rehetra izany raha toa ka marina ny vaovao ary manome angona maharesy lahatra hahitana ireo « naman'ny vahiny. Ny orinasa Fanindroany izao no niaretany fangalarana ity caliber ity Ary ny tamin'ny 2011 lasa teo dia nangalarin'izy ireo (tamin'io fotoana io tao amin'ny biraon'izy ireo) prototypes roa momba ny antsoina hoe Razer Blade ankehitriny.
Ny alahady 8 janoary lasa teo tokony ho tamin'ny efatra ora hariva dia niseho ny fandrobana amin'ireo prototypes ireo, amin'ity tranga ity, ny iray tamin'izy ireo dia nanangana fanantenana marobe tao amin'ny CES somary decaffeined satria solosaina finday miaraka amina efijery telo misy résolution 4K, ny Project Valerie. Mazava ho azy, izay naseho dia tsy vokatra farany, lavitra azy io, fa ny ezaka, vola ary ny asan'ny orinasa ao aminy dia voamariky ity halatra ity. Antenaina fa ho hita tsy ho ela ireo olon-dratsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » 25.000 $ ho fampahalalana momba ireo prototypes nangalarina tamin'i Razer tamin'ny CES 2017
ASUS VivoPC X, solosaina avo lenta ary habe matevina
Samsung Galaxy S8 dia hamidy amin'ny 18 aprily